Izindaba - Ungalikhetha kanjani isixubho sezingane
Iningi labazali lizohlakulela umkhuba wezingane zabo wokuxubha amazinyo kusukela ebuntwaneni, ngakho-ke izingane kufanele zixubhe nini amazinyo azo kangcono? Hlobo luni lwebhulashi lamazinyo okufanele ngilikhethe? Yiziphi izinyathelo zokuphepha lapho ukhetha ibhulashi lamazinyo lezingane? Ase sabelane namuhla: Ungalikhetha kanjani isixubho sezingane
Ake sibheke isikhathi lapho ingane iqala ukuxubha. Lapho ingane icishe ibe neminyaka emibili ubudala, amazinyo aphezulu naphansi aphansi ngokuyisisekelo. Ngalesi sikhathi, umama oqaphelayo kufanele ahlakulele imikhuba yokuxubha yengane futhi athengele ingane efanelekayo. Ibhulashi lamazinyo liphumile.
Lapho ukhetha ibhulashi lamazinyo lezingane, into yokuqala okufanele uyibheke ukuthamba kwezihlakala zamabhulashi amazinyo. Ibhulashi lamazinyo lengane kufanele lenziwe lithambe ngangokunokwenzeka. Ungasebenzisi ama-bristles aphakathi nendawo futhi kanzima. Ama-bristles aphakathi nendawo nosindayo azolimaza ukuthamba kwengane. Izinsini.
Ngaphezu kwalokho, hlola ukuthi ngabe ichopho lebhulashi lamazinyo lezingane elikhethelwe ingane yakho lincane, alivuleki kakhulu, elibanzi akulula ukuzungezisa kalula emlonyeni wengane uma lincane kakhulu, kanti ichopho elincane lingaba enkulu Indawo Ukuxubha.
Kukhona futhi inkinga yesibambo. Ngenxa yokuthi isandla esincane sengane sincane uma kuqhathaniswa, ungakhethi isibambo esincane kakhulu, kodwa isibambo esijiyile kancane, esizosiza ingane ukuthi ibambe lapho igeza amazinyo. Lapho uthenga isixubho, qiniseka ukuthi uletha ingane yakho ukuze isetshenziswe.
Bese kuba nesikhathi sokushintshwa kwamabhulashi amazinyo ezingane. Kunconywa ukuthi uzibuyisele njalo ezinyangeni eziyi-3-4, esikhundleni sokulinda kuze kube yilapho ibhulashi lamazinyo ligobile noma liwile. Vele, uma ibhulashi lamabhulashi ligobile noma liwile zingakapheli izinyanga ezintathu, bese ulibuyisela ngokushesha.